Top 5 Atụmatụ na adị iOS 9/8: Mee iPhone agba ngwa ngwa
Top 5 Atụmatụ na iji ọsọ Up iOS 9/8: Mee iPhone agba ngwa ngwa
"My iPhone na-agba ọsọ ọzọ na ndị ọzọ ji nwayọọ nwayọọ na mgbe iOS 9 update. Ọ bụ n'ebe a ụzọ ọ bịa ọsọ ọsọ? Ọ na-adịghị emeghachi omume dị ka ngwa ngwa dị ka n'ihu. Ọ bụ n'ezie na-egbu mgbu na-eji ya."
iOS 9 bụ coolest sistemụ maka iPhone ugbu a. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ ndị na-enwe niile ọhụrụ atụmatụ iOS 9 na-eweta obi ụtọ na-, ụfọdụ ndị na-eche na-egbu mgbu iji ya. Ụfọdụ ndị okenye ngwaọrụ, dị ka iPhone 4S, iPod emetụ 5th ọgbọ, iPad 2, iPad na Retina ngosi ga-aghọ nnọọ nwayọọ nwayọọ mgbe upgrading ka iOS 9. Ma ihe ka njọ, mgbe upgrading gị iOS ngwaọrụ iOS 9, ị na-agaghị ekwe downgrade si iOS 9 iOS 8 ma ọ bụ mbụ. Ka Kweta. Dabara nke ọma, e nwere ndị ka Atụmatụ na adị iOS 9/8 na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. Na-esonụ, Aga m ewere iPhone dị ka ihe atụ iji gosi gị otú ị adị n'elu iPhone na iOS 9/8.
Olee otú adị n'elu iPhone na-agba ọsọ iOS 9/8
1. Hichapụ ejibeghi ngwa ọdịnala na iPhone
Ka tufuo ejibeghi ngwa site iPhone. Enweta na ihe ngwa na gị iPhone Home ihuenyo. Jide ya ruo mgbe niile ngwa ọdịnala na-amalite wigul. Wee pịa X na elu ekpe nke ọ bụla na-achọghị ngwa wepụ ya si gị iPhone. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla nsogbu ka ihichapụ ihe ngwa, kwuo na ị pụghị ịhụ 'X', biko lelee nchọpụta nsogbu ebe a >>
2. Doro Anya junk faịlụ
Ratụ ratụ faịlụ, dị ka log faịlụ, iTunes syncing cache, download temp faịlụ, ngwa cache, foto / video cache, ngwa kuki, ma ngwa temp faịlụ ndị jupụtara gị iPhone mgbe ị na-eji ya. Na adị iOS 9/8 na gị iPhone, na-agbalị '1-Pịa nzacha na mkpocha' atụmatụ Wondershare SafeEraser Windows version ma ọ bụ Wondershare SafeEraser maka Mac. Ọ bụ ike na-egosipụta niile junk faịlụ na ka ị na-ewepụ ha kpam kpam site na gị iPhone. Download Wondershare SafeEraser Windows version ma ọ bụ Wondershare SafeEraser maka Mac inwe a na-agbalị!
3. Zuru wepụ na-achọghị faịlụ site na iPhone
Kpamkpam wepụ na-achọghị ozi ederede na ozi ederede Mgbakwụnye, foto, ndetu, Safari cache, Safari akụkọ ihe mere eme, kuki, keyboard cache, na ndị ọzọ si gị iPhone. Unu maara ihe ndị faịlụ ogide nke ukwuu ohere. Iji nweta ha ehichapu kpamkpam, na-agbalị atụmatụ "ihichapu Private Data" na Wondershare SafeEraser. Maka nkọwa ndị ọzọ maka otú iji nke a software, biko lelee ndu n'ihi na Wondershare SafeEraser.
4. Ọgwụgwụ multi-ọrụ na iPhone
Ọ bụrụ na ị na-adịghị eji ihe ngwa ma ọ bụ a ọrụ ugbu a, i kwesịrị iji kwụsị ọrụ ahụ. Multi-ọrụ ga-akwụsịlata gị iPhone mgbe ị na-agbalị iji ihe ngwa. Kpatụ Home button ugboro abụọ na inwe. Swipe elu na a thumbnail.
5. gbanyụọ ngagharị mmetụta na nghọta
Ka ịgbanyụọ ngagharị, pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Accessibility> Belata Motion na ịtọ Belata Motion Gbanye.
The n'elu kwuru banyere ndị top 5 Atụmatụ m nwere ike na-eche nke na adị iOS 9/8, na-eme gị iPhone agba ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla aro, biko, ka m mara site na-ahapụ ndị ikwu na peeji a. Aga m anọgide na imelite isiokwu. N'ihi!
Olee otú Hichaa iPhone / iPad / iPod aka Wụnye iOS 8
Olee otú Wụnye iOS 8 on iPhone / iPad / iPod aka
Olee otú Hichapụ Kọntaktị na iOS na ogbe
Olee otú Naghachi Data si iOS 9 Devices (iPhone / iPad)
Otú nyefee Data si Google Nexus ka iOS Devices
Otú nyefee Data si Sony ka iOS
Olee otú Naghachi Lost Data mgbe kwalite ka iOS 6
> Resource> iOS> ọsọ Up iOS 9/8: Mee iPhone agba ngwa ngwa